FIAROVANA NY ZO HO AN’NY FANANAN-TANY : Bokin-tany maherin’ny 32 000 isa no hozaraina amin’ity taona ity
Mametraka fanamby lehibe hitantanana ny fananan-tany manerana an’i Madagasikra ny Minisiteran’ny fanajariana ny tany noho ireo olana mateti-pitranga eo amin’ity sehatra ity. 26 février 2020
Amin’ity taona 2020 ity, bokin-tany (titres) miisa 32.000 isa any ho any no napetraka hozaraina manerana ny Nosy ary nanombohana ny fizaràna ny tao Ankazobe. Tafiditra ao anatin’ny lamina ho an’ny fanavaozana ny fitantanana sy fiarovana ny zon’ny fananan-tany izany. Efa niantomboka tamin’ny volana janoary teo io fizaràna bokin-tany io, ary tamin’ny fiandohan’ity herinandro ity dia ny mponina tao amin’ny kaominina Fihaonana, Distrika Ankazobe no nisitraka izany fizaràna izany. Bokin-tany 230 isa eo no nozaraina ho an’ny mponina tany an-toerana.
Ankoatra ny kaominina Fihaonana, hotohizana amin’ny kaominina rehetra ao amin’ity Distrika ity io fizaràna bokin-tany io. Manomboka ny 2 marsa 2020 izao ny fisoratana anarana eny amin’ny kaominina rehetra ao amin’ny distrikan’Ankazobe ho an’ireo maniry hanoratra ny taniny aminy, ka hamafisina amin’ny alalan’ny fanomezana bokin-tany izany.
Ny 6 marsa 2020 dia hisy hetsika lehibe harahina varavarana misokatra sy fampirantiana ao amin’ny birao iombonan’ny fananan-tany sy fandrefesan-tany vaovao ao Ankazobe hampahafantarana ny mponina any ireo dingana sy lalana tokony harahina raha te hanoratra ny tany amin’ny tompony ary hisitraka bokin-tany na kara-tany ara-dalàna avy amin’ny fanjakana.
Tsiahivina fa anisany velirano napetraky ny Filohan’ny Repoblika, Andry Rajoelina ny hahafahan’ny Malagasy rehetra misitraka malalaka sy ara-dalàna ny zo ho an’ny fananan-tany. Maro ny ezaka sy fanavaozana efa natao eo amin’ny sehatry ny fananan-tany anisan’izany ny fiarovana ny zon’ny olona hisitraka ny taniny amin’ny alalan’ny fanomezana azy porofo mazava amin’izany zony izany toy ny kara-tany na bokin-tany. Manoro hevitra sy mampianatra ny mponina ny tokony hatao koa ny birao ifoton’ny fananan-tany isaky ny Distrika manerana an’i Madagasikara.